Ahoana no hamantarana fanahy vady, ny olona izay manana fijery sy mahatsapa?
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ahoana no hamantarana fanahy vady, ny olona izay manana fijery sy mahatsapa?
Soul vady, izay voalaza ho efa mifandray amin 'ny fanahiny tsy ho any amin'ny fiainana teo aloha, isaky ny fivoriana mamerina im-betsaka ny Reincarnation, dia nanorina fifandraisana akaiky. Noho izany, dia azo inoana fa ho tojo eto amin'ity tontolo ity no avo dia avo, ny olona sasany efa nanorina fifandraisana tsara efa nihaona, dia ny olona sasany hihaona manomboka izao.
momba vadinao izao fanahintsika izao, dia misy fomba maro mba hilaza izany. Fihetseham-po izay mitranga ao tenanao ianao, rehefa miaraka amin'ny olona, ??dia voalaza fa fahita ny olona nifanena tamiko tao Seoul vadiny. Ankoatra izany, dia mety ho hita avy toy ny hijery sy hahatsapa.
rehefa nihaona tamin'ny vadiny ny fanahy, tsy te-hanadino ny fihaonana. Ao eto, dia hijery, anisan'izany ny fijery sy ny mihevitra ny fomba hamantarana fanahy vady. Ao amin'ny
hijery sy hilaza ny fomba ny fanahy vadiny mba hatramin'ity tany rivotra
: Inona moa Izy Ireo, ary Ahoana no hamantatra ny fanahy vady mety ho hita avy amin'ny fijery sy mahatsapa.
? hijery fantany fa
, ohatra, dia ho maro ny olona izay manana ny karazana ao amin'ny toerana tena fijery. Izany ihany koa matetika ho tonga tahaka ny olona-tarehiny. Fa amin'ny fanajana ny fanahy vadinao, dia afaka mitady foana dia matetika no tsy avy amin'ny tenany ihany karazana. Raha ny marina ny olona dia fanahy nihaona vady, na dia tsy ny karazana rehefa nihaona vao voalohany izao, hoy Izaho koa mba efa sao Nahasarika. Ao
, ka ataovy hoe na tsy hanavaka na olona * vadiny ny amin'ny miseho ihany hatao, dia ny ampahany kely, fa mpitarika teoria fa ny olona izay endrika na pelatanan'ny ny tanana, ny tandra, toy ny scratches toy izany koa. Ary ny olona izay efa nandany andro izany hatry ny ela, toy ny ampahany kely tonga mitovy amin'ny voajanahary. Ny olona hiantso sy
vadiny fanahiko ho hita ao
? rivotra no matetika hoy tenako sy ny rivo-piainana dia tahaka. Raha misy mpiara-miombon'antoka izay efa antsoina hoe avy any amin'ny firenena manodidina, angamba fotsiny ny Ny olona mety fanahy vady. A fanahy vady, toetra sy ny soatoavina, satria milaza fa be dia be amin'ny mahazatra, toy ny fomba fisainany sy ny fitondran-Tempo, hoy ianareo: fa tsy maintsy ihany koa ny rivo-piainana toy izany koa avy.
satria toy izany mitovy amin'ny olona roa izay ahitana matetika hoe, ho iray amin'ireo Ahoana no hamantarana soulmate ihany koa satria manana ny rivo-piainana tony ny antony sy ny maha miara-. Ny olona izay manana ny rivo-piainana izay afaka mijanona ao amin'ny fihetsika voajanahary araka ny dia tsy manahy mihitsy ny hoe, dia mety soulmate.
koa ny mihaona eto amin'ity tontolo ity ny fanahy vadiny izay efa Meguria 'matetika
mba hitsena ny fanahy vady, tsy maintsy ho afaka hisarihana ny ain'ny tsirairay. Noho izany, raha ny toetra izay Mamoaka ny aura ny tenany, ho avy tia azy io akaiky kokoa na dia fanahy vady.
fanahin'ny ny aura dia zavatra izay namirapiratra izy, na dia tsara mamirapiratra. Toy ny asa sy ny fialam-boly, raha liana ianao miasa mafy amin'ny tena fihetseham-po, fanahy vadinao Raha nahatsikaritra mety ho niseho teo anoloan'ny maso.
Toy ny tsiro, rehefa avy miasa mafy ny tena fihetseham-po ireo dia mandoro firehetam-po, fanahy vadinao Raha nahatsikaritra mety ho niseho teo anoloan'ny maso.